मुक्तिनाथ फाउन्डेशनको शुभारम्भ
२१ मंसीरमा मुक्तिनाथ फाउन्डेशनको शुभारम्भ भएको छ।
लक्ष्मी ब्यांकका दुई शाखा र एक एक्सटेन्सन काउन्टर स्थापना
लक्ष्मी ब्यांक लिमिटेडले दुई नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएकोे छ।
४७ वटा ढुवानीका सवारी साधन सहकारीलाई हस्तान्तरण
हेफर इन्टरनेशनल नेपालले ४७ वटा कृषि सामग्री ढुवानीका सवारी साधन सहकारीलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
अर्थतन्त्र सुधार्न ४८ अर्ब ऋण लिँदै सरकार कोभिड-१९ महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ४० करोड अमेरिकी डलर (करीब रु. ४८ अर्ब) ऋण लिन लागेको छ।
संसारका १० प्रतिशत धनीसँग ७६ प्रतिशत सम्पत्ति, ५० प्रतिशत गरीबसँग २ प्रतिशत मात्रै संसारका १० प्रतिशत धनीले कुल सम्पत्तिको तीन चौथाइ हिस्सा ओगटेको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ।
एनसेल र राकुटेन भाइबरको साझेदारी एनसेल आजियाटा लिमिटेड र राकुटेन भाइबरले एनसेलका ग्राहकलाई विशेष डाटा प्याकेज प्रदान गर्न साझेदारी गरेका छन्।
गोर्खा ब्रुअरीको फायर मुन बियर सार्वजनिक गोर्खा ब्रुअरीले फायर मुन बियर सार्वजनिक गरेको छ।
नयाँ कोना इलेक्ट्रिक सार्वजनिक नेपालका लागि हुन्डाई अटोमोबाइलको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले नयाँ इलेक्ट्रिक कोना सार्वजनिक गरेको छ।
संघीयताका कारण सरकारको वित्तीय खर्च बढ्यो : विश्व ब्यांक विकास साझेदार विश्व ब्यांकले नेपालमा लागू गरिएको संघीय प्रणालीले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याए पनि सरकारको खर्च बढेको बताएको छ। विश्व ब्यांकको नयाँ अध्ययनले संघीयताका कारण सार्वजनिक ऋण र बजेट घाटा पनि बढेको देखाएको छ।
भागबण्डा मिलाउन राज्यकोषमा भार मुख्यमन्त्रीहरूले सत्ता जोगाउन भागबण्डा मिलाएर मन्त्रालय फुटाउने घातक बाटो रोजेका छन्। यसले दीर्घकालसम्मै नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्छ।
३२ अङ्कले बढ्यो नेप्से, परिसूचक २५४६ बिन्दुमा सोमबार शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) ३२.२२ अङ्कले बढेको छ।
स्मार्टफोन ब्रान्ड रियलमीले मुरारका ग्रुपसँग मिलेर नेपालमा नार्जो सिरिज ल्याएको छ।
केएल दुगड समूह अन्तर्गतको स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई उत्कृष्ट निर्यात कम्पनीका रूपमा सम्मान गरिएको छ।
होण्डा एमेजको नयाँ मोडेल सार्वजनिक
नेपालका लागि होण्डा कारको आधिकारिक विक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिले एमेजको नयाँ मोडेल सार्वजनिक गरेको छ।
बुटवलमा शाओमीको स्टोर शाओमीले रूपन्देहीको बुटवलमा आफ्नो आधिकारिक स्टोरको शुरूआत गरेको छ।
उपाय सिटी कार्गोलाई बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड उपाय सिटी कार्गोले दि बेस्ट स्टार्टअप अफ दि इअर अवार्ड, २०२१ प्राप्त गरेको छ।
उपल्लो डोल्पाका विद्यार्थीलाई ज्योति विकास ब्यांकको सहयोग ज्योति विकास ब्यांकले उपल्लो डोल्पाको न्यासिल गाउँस्थित श्री यान्जेर गुम्बा विद्यालयका विद्यार्थीलाई हिमालयन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (एचडीआई)को ‘प्रोजेक्ट ज्योति’ मार्फत रु.२ लाखको आर्थिक सहयोग गरेको छ।
प्यानल सहित ध्रुव थापा नाडा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दै अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)को आगामी निर्वाचनका लागि ध्रुव थापाले प्यानल सहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
शिवम् सिमेन्टद्वारा ५०० निर्माणकर्मीको जोखिम बीमा शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले गण्डकी प्रदेशका ५०० जना निर्माणकर्मीको जोखिम बीमा गरेको छ।
राष्ट्र ब्यांकको ढुकुटीमा कति छ सुनचाँदी? वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत राष्ट्र ब्यांकको ढुकुटीमा रहेको सुनचाँदी सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानका कर्मचारीले विना धितो १५ लाख कर्जा पाउने राष्ट्रिय बीमा संस्थानका कर्मचारीले नेपाल ब्यांक लिमिटेडबाट विना धितो रु.१५ लाखसम्मको कर्जा पाउने भएका छन्।